रिपोर्ट शनिबार, फागुन १०, २०७६
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वास पात्र रहेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको पद धरापमा पार्नेगरी अडियो सार्वजनिक भएपछि लमजुङ नेकपाका नेता–कार्यकर्ता नै आश्चर्यमा परे । तत्कालीन एमाले लमजुङको लामै समय नेतृत्व गरेका धनञ्जय दवाडी आफूसँगै पढेका विजय मिश्रको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन सुनेर आश्चर्यमा परेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “व्यापार गर्छु भन्ने विजय पार्टीका सामान्य समर्थक मात्रै हुन्, तर यसपटक पूरै नेकपासँगै देशलाई तरंगित बनाए ।”
लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका–७ का विजय मिश्र २०४२ सालमा पढ्नका लागि काठमाडौं आएका थिए । गण्डकी प्रदेश सांसद रहेका दवाडी सम्झन्छन्, “एसएलसी सकेर सँगै काठमाडौं आयौं र पिपल्स क्याम्पसमा भर्ना भयौं । त्यसपछि स्नातक पढ्न म त्रिचन्द्रमा भर्ना भएँ, उनी रत्नराज्य लक्ष्मी (आरआर) क्याम्पस गए ।”
अर्थशास्त्र पढ्न मिश्र आरआर क्याम्पस गएपछि दवाडीसँगको सम्बन्ध पातलियो । “म राजनीतिमा पूरै सक्रिय भएर जिल्ला फर्किएँ, उनी काठमाडौंमै बसे”, दवाडी भन्छन् ।
लमजुङ एमालेको नेतृत्व गरिसकेका प्रतिनिधिसभाका पूर्व सांसद जमिन्द्रमान घले पनि मिश्र पार्टीको शुभेच्छुक मात्रै रहेको बताउँछन् । “भेटघाट हुँदा ठूला नेताहरुको नाम लिन्थे, तर पार्टीको कुनै कमिटीमा रहेको याद छैन”, घले भन्छन् । तर, काठमाडौंमा हुने एमालेका गतिविधिमा प्रायजसो मिश्र देखिन्थे । “महँगो गाडी लिएर ठूला नेताको वरिपरि घुम्थे” घले भन्छन्, “निर्वाचनका बेला अलिअलि सहयोग गर्थे होलान् ।”
एमालेका कार्यक्रममा प्रायः देखिने मिश्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता हुन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका भएकाले गुरुङसँग कुनै बेला नजिकैको सम्बन्धमा थिए, मिश्र ।
“भेटघाट हुँदा ठूला नेताहरुको नाम लिन्थे, तर पार्टीको कुनै कमिटीमा रहेको याद छैन”, घले भन्छन् । तर, काठमाडौंमा हुने एमालेका गतिविधिमा प्रायजसो मिश्र देखिन्थे । “महँगो गाडी लिएर ठूला नेताको वरिपरि घुम्थे” घले भन्छन्, “निर्वाचनका बेला अलिअलि सहयोग गर्थे होलान् ।”
तर, दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा गुरुङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेपछि सम्बन्ध बिस्तारै पातलियो । मुख्यमन्त्री गुरुङ निकट स्रोतका अनुसार, अनेक प्रस्ताव लिएर आउन थालेपछि मिश्रसँगको दूरी टाढियो । अहिले मिश्रका लागि मुख्यमन्त्री गुरुङको ढोका बन्द छ ।
“ब्यापार गर्छु भन्थे, गाउँका दुई/चार जना भाइहरुलाई जापान पनि पठाएका छन्, तर यति ठूलो सम्बन्ध बनेको थाहा थिएन”, दवाडी भन्छन् । २०४२ सालमा काठमाडौं आएपछि लमजुङ नफर्किए पनि मिश्रकाे पारिवारिक पृष्ठभूमि भने एमाले नै हो । लमजुङमा राम्रै जग्गाजमिन भएका परिवारमा पर्छन्, मिश्र ।
सुन्दरबजार नगरपालिकाका मेयर जनक मिश्र आफन्त भएको विजयले बताउने गरेका छन् । तर, उति धेरै नजिकका भने होइनन् ।
बरू, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका सहायक डिन सरोज मिश्र विजयका दाजु हुन् । सरोजलाई भने एमालेले आफ्ना शुभेच्छुक ठान्छन् । तर, दाजुको सम्बन्धबाट नभएर एमालेकै ठूला नेताहरुसँगको हिमचिमबाट विजयले पार्टी सम्बन्ध निर्माण गरेका थिए ।
स्थानीय पार्टी कमिटीसँग नजोडिएका विजयले पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँगको सम्बन्ध समेत जमाउन नसके पनि शीर्ष नेताहरुसँग राम्रै जमघट गर्ने वातावरण बनाए । उनलाई चिन्ने एक नेताका अनुसार, विजय मिश्र नेकपाका नेता डा. भीष्म अधिकारीसँग नजिक थिए ।
२०७० को दोस्रो संविधानसभामा सभासद रहेका अधिकारी लामो समय एमाले सम्पर्क विभागका सचिव रहे । २०७१ मा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित अधिकारीसँग राम्रै उठबसमा रहेका मिश्रले २०७२ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि फ्रन्ट लाइनमा आउने अवसर सिर्जना गरे ।
‘नचाहिँदो अफर र प्रस्ताव ल्याएको’ भन्दै पृथ्वीसुब्बा गुुरुङले बेवास्ता गरे पनि विजय मिश्र ओली सरकारका अर्थमन्त्री एवम् प्रभावशाली नेता विष्णुप्रसाद पौडेलसँग नजिकिए । नेकपाका एक नेताका अनुसार, पौडेलसँग मात्रै नभएर मिश्रको सम्बन्ध पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँगै बनेको छ । “आफूलाई पार्टीकै कार्यकर्ता बताएर नेताहरुसँग मिश्रले आफ्नो जालमा नेताहरुलाई फसाए”, उनी भन्छन् ।
मिश्रकै सक्रियतामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरीद गर्ने योजनाकै शृङ्खलामा सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था बन्यो ।
हेर्नुहोस्ः बाँस्कोटाले राजीनामा दिने अवस्था कसरी बन्यो ?
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका बाँस्कोटाले कमिसन बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक गरेका मिश्र अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिदै हिंडेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले उनलाई साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा चलाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
सभापति भरत साह कांग्रेसका सांसद भए पनि बहुमत नेकपाका सांसद भएकाले सहज रुपमा समितिले निर्देशन दियो । यही निर्देशनलाई आधार बनाएर नेकपा नेता–कार्यकर्ताहरुले अहिले मिश्रलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार गराउन उद्यत गराउने अडियो सार्वजनिक गरेकाले कारवाही हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
तर, पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल अडियो सार्वजनिक भएकै आधारमा मात्रै कारवाही हुने आधार कमजोर रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मन्त्रीसँग कमिसनको बार्गेनिङ गरेको अडियो साइबर क्राइम नभएर भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय हो ।” उनका अनुसार, मन्त्रीले नै कमिसनको बार्गेनिङ गरेकाले अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा विजय मिश्र स्वतः अनुसन्धानमा तानिनेछ ।
यदि, अडियो सार्वजनिक प्रकरणबारे अनुसन्धान प्रक्रिया नबढाउने हो भने विजय मिश्रले पनि स्वतन्त्र नागरिकका रुपमा अभिव्यक्ति दिने छुट रहने डीआईजी मल्ल तर्क गर्छन् ।
“ब्यापार गर्छु भन्थे, गाउँका दुई/चार जना भाइहरुलाई जापान पनि पठाएका छन्, तर यति ठूलो सम्बन्ध बनेको थाहा थिएन”, दवाडी भन्छन् । २०४२ सालमा काठमाडौं आएपछि लमजुङ नफर्किए पनि मिश्रकाे पारिवारिक पृष्ठभूमि भने एमाले नै हो ।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भने बाँस्कोटाको राजीनामासँगै अनुसन्धानको बाटो खुलिसकेकाले सरकार यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अडियोले भ्रष्टाचारको प्रयास भएको सार्वजनिक भइसक्यो । तर, राजीनामाले भ्रष्टाचार भएको थिएन भन्ने प्रमाणित हुँदैन ।”
पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय बाँस्कोटा र मिश्र दुवैको सम्पत्तिदेखि सम्बन्धको समेत अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
बाँस्कोटाकै जस्तो प्रकरणमा अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । त्यसै नजीरका आधारमा यो प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा सरकार सुशासनको मार्गमा रहेको अनुभूति दिलाउने अवसर मिल्ने उपाध्याय बताउँछन् ।
तर, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा लगायतले राजीनामा पछि उन्मुक्ति पाएको नजीरले यो प्रकरणमा पनि आशंका उत्पन्न गराएको देखिन्छ ।